Terminolojika famolavolana sary izay matetika manjavozavo ny saotika | Martech Zone
Terminolojia famolavolana sary izay matetika manjavozavo ny saofera
Alahady 19 Febroary 2017 Asabotsy 18 Febroary 2017 Douglas Karr
Nihomehy kely aho rehefa hitako ity sary ity satria, raha ny fandehany, tsy maintsy ho mpamorona endrika sary aho. Saingy, indrisy, mahavariana ny mahita ny zavatra tsy fantatro momba ny indostria izay natsofoka lalina tato anatin'ny 25 taona. Ho fiarovako dia tsy miloka fotsiny aho ary mangataka sary. Soa ihany, ireo mpamoron-tsainay dia mahafantatra bebe kokoa momba ny famolavolana sary noho izaho.
Tokony ho fantatrao ny fahasamihafana misy eo amin'ireo teny matetika tsy takatra amin'ny teny famolavolana sary satria tadidio fa tsy mpivarotra sy mpamorona tsotra ianao fa mpanoratra ihany koa. Tokony ho fantatrao ny entanao! Aamina Suleman
Aamina sy ny ekipa ao amin'ny ThinkDesign atambatra ity sary mahafinaritra an'ny 14 ambony ity izay tsy nahazo ny heviny na diso izay ampiasain'ny mpamorona sary noob.
Font mifanohitra amin'ny Typeface
Ny typeface dia tsy endritsoratra, fa ny endri-tsoratra dia mety an'ny fianakavian'ny typefaces.
Manara-dia an'i Kerning
Ny fanarahana dia ny toerana itovizan'ny vondrona litera, ny kerning no elanelana misy eo amin'ny tarehin-tsoratra tsirairay.
Gradient mifanohitra amin'ny Gradient Mesh
Ny gradient dia tetezamita miandalana avy amin'ny loko iray mankany amin'ny iray hafa manerana ny endrik'ilay endrika. Ny gradient harato dia fitaovana iray mamorona harato amin'ny endrika misy teboka marobe azo ahitsy izay mamela loko, alokaloka ary effets dimensional.
Backdrop mifanohitra background
Backdrop dia manondro lamba na ravina mihantona ao ambadiky ny zavatra iray, fa ny ao ambadika kosa dia izay ao ambadik'ilay zavatra ifantohana amin'ny sary na endrika iray.
EPS mifanohitra amin'i AI
Ny EPS dia rakitsoratra voafandrika, endrika fisie izay mitahiry sary vongana fisaka ary tsy manohana ny mangarahara. AI dia endrika Adobe Illustrator izay misy vector misy sosona na zavatra raster namboarina izay azo ovaina amin'ny fampiasana Illustrator.
Tint mifanohitra amin'ny Tone
Ny Tint dia novokarina tamin'ny fampidirana fotsy amin'ny loko madio, mampitombo ny hazavany. Ny toneo dia ny chroma misy loko, vokarina rehefa ampiana volondavenona amin'ilay loko.
Tondro mifanohitra amin'ny tsoratadidy
Ny tsoratadidy dia logo iray namboarina miaraka amin'ny fanaingoana manokana an'ireo litera toy ny fanombohana na fanafohezana. Ny wordmark dia fitsaboana typografika tokana ampiharina amin'ny lahatsoratra amin'ny marika famantarana orinasa na marika.
Hue mifanohitra amin'ny lokony
Hue no endrika madio indrindra fa tsy alokaloka na loko. Ny loko dia mena, volomboasary, mavo, maitso, manga ary volomparasy. Ny loko dia teny rehetra mandika ny teny milaza loko, alokaloka, loko ary feo. Ny lanjan'ilay hue dia manondro loko iray.
DPI mifanohitra amin'ny PPI
DPI no isan'ny teboka isaky ny pejy pirinty. PPI no isan'ny pixel isaky ny santimetatra amin'ny sary nomerika.
White Space mifanohitra amin'ny Negative Space
Ny habaka fotsy no ampahan'ny pejy iray tsy nasiana marika. Mety ho loko izany fa tsy fotsy fotsiny. Ny habaka ratsy dia famolavolana fanahy iniana tsy misy singa famoronana hamoronana sary eritreritra.
Wiresframe mifanohitra amin'ny Prototype
Ny Wireframe dia drafitra volavolan-drafitra iray ampiasaina amin'ny fizarana ati-doha amin'ny fampiasana sketches na fitaovana. Prototypes dia fanehoana marina ireo volavola ahafahanao mifanerasera aminy alohan'ny hamaranana sy hamokarana ilay tetikasa.
Bitmap mifanohitra amin'i Vector
Bitmaps, na sary an-tsary rasterized, dia sary iray tsy hay resena vita amin'ny takelaka pixel. Ny endrika mahazatra dia GIF, JPG / JPEG, na PNG. Ny sary Vector dia endrika azo ovaina vita amin'ny raikipohy izay tsy misy fiovana amin'ny kalitao ny fanovana ny habeny. Ny endrika mahazatra dia ny AI, EPS, PDF, ary SVG.
Mainty sy fotsy mifanohitra amin'ny grayscale
Ny vokarin'ny B / W na B&W dia vita amin'ny mainty sy fotsy madio. Ny griscale dia sary na zavakanto misy sanda isan-karazany avy amin'ny fotsy ka hatramin'ny mainty amin'ny loko na alokaloka rehetra.
Fambolena sy ny marika Crop
Ny cropping dia manala ireo faritra ivelany amin'ny sary izay tsy ilaina. Ny crop mark dia tsipika nampiana eo amin'ny zoron'ny sary hanampiana ireo mpanonta amin'ny fanapahana sy famolavolana.
Fepetra 14 diso fampiasa indrindra ampiasain'ny mpamolavola sary Noob
Raha tsy ampy ny fanazavako etsy ambony dia ity misy infographic misy ohatra:
Tags: Aamina Sulemanadobe mpanao saryairesahanaBackdrop mifanohitra backgroundlafikaBitmapBitmap mifanohitra amin'i VectorlokoMarka volyCroppingFambolena sy ny marika Cropterminology famolavolanadpiDPI mifanohitra amin'ny PPIlahatsoratra voasoratraEPSmanaoFont mifanohitra amin'ny TypefacegradientGradient haratoGradient mifanohitra amin'ny Gradient Meshfamolavolana Saryendrika endrika famolavolana saryterminology famolavolana saryHuehue mifanohitra amin'ny lokokerningtsoratadidymari-tsoratra mifanohitra amin'ny tsoratadidylogodesignguruToerana maharatsyppinitranga fahinyrastervoambolanaeritreritraTintloko mifanohitra amin'ny feofihetseham-poampyManara-dia an'i KerningKarazan-tsoratraVectorvector mifanohitra amin'ny rasterhabaka fotsyWhite Space mifanohitra amin'ny Negative SpacewireframeWiresframe mifanohitra amin'ny Prototypefehezan-teny
Fanontaniana 5 hapetraka amin'ny consultant amin'ny Optimization amin'ny Search Engine
Fomba 8 hamoronana atiny mamorona mpanjifa
Mar 21, 2017 ao amin'ny 1: PM PM
Natambatra tsara izany. Misaotra anao sy Aamina Suleman, asa tsara.